Nandroso lalàna hiarovana ny biby mirenireny i Costa Rica · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Oktobra 2012 2:45 GMT
Vakio amin'ny teny русский, polski, Español, Italiano, Français, Aymara, English
Tamin'ny 10 oktobra lasa teo dia nanao sonia ny lalàna momba ny fanaraha-maso hentitra ny vombon'atsantsa ao anatin'ny fari-dranomasin'i Costa Rica ny filoha Laura Chinchilla.
Na dia efa tsy azo natao nanomboka tamin'ny taona 2001 aza ny fihazana atsantsa tany Costa Rica dia misy ihany ny tsy fahatomombanana eo amin'ny fampiharana ny lalàna ka mamela ny fivarotana vombon'atsantsa hatramin'izao. Ny tanjona amin'ity lalàna vaovao vao nosoniavina ity dia ny tsy fahazoana manondrana vombon'atsantsa avy ao an-toerana hanafoanana ny fivarotana azy sy ny fanafarana azy koa.
Tamim-pifaliana no nandraisana ny vaovao teo amin'ny vondrona miaro ny tontolo iainanana sy ny fikambanana tsy miankina ary olom-pirenena an-jatony maro izay efa nandefa taratasy maromaro any amin'ny Fanjakana Mpanatanteraka hanajanonana ity fomba ratsy ity. Toy ny nalefan'i Carol Corrales tao amin'ny Rainforest Radio [es]:
Fomba tena ratsy sady mandringana ity fangalana vombon'atsantsa ity satria samborina ireo atsantsa ireo, avy eo esorina ny vombony, ary averina any anaty ranomasina indray izay ireo ary maty afaka fotoana fohy satria mangirifiry mafy.
Sary atsantsa nalefan'i Philippe Guillaume, nahazoana alàlana tamin'ny Creative Commons (CC BY 2.0)
Nahitana fanehoan-kevitra mikasika ny fanaovana sonia ka nahazoan'ny filoha tombony ao amin'ny twitter mampiasa ny rohy #NOALALETEO (“Tsy ekena ny fangalana vombo”). Anisan'ireny i Marianela Castro (@necascru) [es] :
@necascru: #noalaleteo Tsy misy indrafo ho an'ny mpaka vombo! Tokony hampiharina ny lalàna! Ho ela velona anie ny hazandranomasina aty amintsika! Hiaina an-kalalahana ireo zavaboary! #CR
Fa tsy izay ihany no vaovao mahafinaritra eo amin'ny lafiny fiarovana ny tontolo iainana ho an'ny mponina any Costa Rica. Tamin'ny 2 oktobra, nankatoavin'ny mpanao lalàna ny volavolan-dalàna hiarovana ny tontolo iainana naroson'ny mpanatanteraka teo anoloan'izy ireo, lalàna mandroso hevitra hanafoanana ny fanatanjahan-tena mihaza any an-toerana. Vatsian'ny Fikambanana miaro ny Tontolo Iainana (Aprelofas) vola ity tetik'asa ity ary raha ankatoavina mandritra ny fivoriana ady hevitra faharoa dia i Costa Rica no ho firenena voalohany any Amerika Latina hanasazy izay manao io fanatanjahan-tena mihaza io.
Notohanan'ny olom-pirenena io volavolan-dalàna io ka tafakatra 177 000 ny isan'ny olona nanao sonia hanohanana ilay volavolan-dalàna. Miaraka amin'ny teny faneva hoe “Famonoana ny fihazana”, olona marobe no nandray anjara, izay sambany nisy an'izany ary voarain'ny kongresy.
Ny bilaogy “Generación Rebelde” (Taranaka mpioko) [es] nitantara ny zava-misy ho toy ny “lalao iray ho an'ny biby mpirenireny” [es] ary faranany amin'ny hafatra hoe:
“Ankalazaintsika ity andro ity. Ary ho malina tsara isika manomboka izao ka tsy hisy hanohintohina iny lalàna iny ary harahantsika maso ny fanatanterahana azy antsakany sy andavany.”
Nahazo fanankianana mafy kosa ireo mpikambana ao amin'ny kongresy nitsipaka iny lalàna iny. Susan nanoratra ao amin'ny Maecr’s blog [es]:
“Aty Costa Rica, hihinana biby avy amin'ny haza? Angamba tamin'ny andron'ny Vato . Ny resaka fanatanjahantena fihazana no ao ambadiky ny teny mihoampampana izay iezahany hanafenany ny zava-drehetra.[…]
Efa manakaiky ny fifidianana, angamba mety hadinon'ny ankamaroan'ny olona ny maha akaiky azy, kanefa zava-dehibe ny hieritreretana sahady dieny izao izay olona mendrika ho eo amin'ny fitondrana, fa tsy izay mitady seza fotsiny ka midongy hijanona eo, miaraka amin'ny karama be, ary hifidy sy hanapan-kevitra eo amin'ny toeran'ny HAFA”
Afaka arahanao ao amin'ny rohy #LeydeVidaSilvestre [es] (Lalàn'ny biby mpirenireny) ny mikasika ilay lalàna.
“Mihantona manodidina”. Sary ao amin'ny Flickr nalefan'i marissa_strniste, nahazoana alàlana tamin'ny Creative Commons (CC BY 2.0)